Umqhubi wokuqala weTiger Woods njengePro kwiPGA Tour
Ngo-1996 iMilwaukee Open yilapho iPols yokuqala idlala emva kokuguqula
Ngabe iTiger Woods yenze nini kwaye kuphi? I-Woods yaqala ukudlala njenge-golfer yobungcali kwi-Greater Milwaukee Open ye-1996, edlalwa kwi-Brown Deer Park yeGrade Course eMilwaukee ecaleni laseGlendale.
Umqhudelwano waqala ngo-Agasti 29, 1996-ngaloo mhla u-Woods atshayela iibhola zegalufa zokuqala njengegolfer-professional and ended on Sept. 1, 1996.
Ngoko i-Woods yagqiba kuphi kwindawo yakhe yobungcali? Kwi-tie kwindawo engama-60.
Masihambe ngaphaya kweenkcukacha ze-Woods 'debut yokuqala.
Indlela amahlathi afike ngayo kwi-1996 enkulu iMilwaukee Vula
NgeSonto, ngo-Agasti 25, 1996, i-golfer yamateur i-Tiger Woods yanqoba i- US Amateur Championship . Yaba yintlanzi yokuqala yokuphumelela ama-US amadoda angamaxesha amathathu alandelayo.
Ngeminyaka engama-20 ubudala, i-Woods yagqiba ukuba yithuba lokuguqula inkqubo. Wamkela isimemo senkxaso yokudlala kwi-Greater Milwaukee Open. Kwiintsuku ezimbini kamva ngoLwesibili weveki ye-GMO yintlonelo, i-Woods yabhengezwa ngokukhutshwa kwe-press release.
Ngolunye usuku ngaphambi kokuba umdlalo uqale, ngoLwesithathu, i-Woods ibambe iqela layo elidumiweyo elithi "Sawa, hlabathi"
I-Woods, into ephambili yegalufa ukususela ngoJack Nicklaus , ukuguqula iprogram yayiyinxalenye enkulu . Kwaye i-Greater Milwaukee Open yayisetyenziselwe ukuqala kwayo.
Kodwa nantsi into ejabulisayo: Nangona i-Woods yayisandul 'isayine iindleko ezithengisa iidola ezingama-40 zamaRandi, kwafuneka iboleke imali yokungena kwi-100 yenqaku lomqhubi kwi-Butch Harmon.
Izikolo zikaMatyi kwi-Greater Milwaukee ye-1996
Ngomjikelezo wokuqala we-Woods njengeprogolfer, wafaka amanqaku angama-4-ngaphantsi kwe-67. Isiqalo esihle kakhulu. Kodwa ngaloo mini, uNolan Henke wadubula 62, ngoko i-Woods yayisele iinqunqwana ezinhlanu ezikhokelayo.
Ukuqala kokutshulwa kweTolds njengepro? I-336-yard drive eyifumane i- fairway kwindawo yokuqala.
Kwi-Round 2, i-Woods idutshulwa 69 ukuma kwi-6-phantsi kwe-136, izibetho ezisibhozo emva kweenkokheli. Kodwa yena wenza isinqununu.
Ingqungquthela engama-73 yayingamaphuzu akhe awona mdlalo, kwaye wagqiba nge-68 kwinqanaba lokugqibela. Amanqaku angama-Woods angama-7-ngaphantsi kwe-277, eboshwe kwindawo engama-60. Kwakuyimivimbo engama-12 emva komnqoli, uLoren Roberts (obetha uJerry Kelly ngokukhawuleza).
Emva koko, i-Woods yayinokwenzeka oku kuthetha malunga nokuqala kwakhe kobugcisa:
"Kukho konke, ndicinga ukuba iveki yayimnandi kakhulu. Konke okwenzekayo, ukuguqula, zonke ezinye izinto, ndandiziva ndikwazi ukudlala kakuhle kakhulu.
Omnye Wokuqala: I-Ace yokuqala ye-Ace njengoPro
I-Tiger ayizange iphumelele umqhudelwano wayo wokuqala, kodwa wenza into emangalisayo ngaphandle kwayo: Wenza umgodi-ngeyodwa . Kwenzeka kwinqanaba lokugqibela. Izinkuni zasebenzisa i-iron-6 ukuya kwinqanaba le-3 le-14 ukusuka kwiiyure ezingama-188.
Uthi Woods: "Ndatshilo wam u-caddy, 'Ndiyicinga ukuba andinakuyenza into emidlelweni ndiyakwazi ukuxhoma into ethile kuyo.'"
Ingakanani Imali eyenziwe nguThuni eyenzeka kwiPro Debut yakhe?
Ikhekhe lokuqala lokuhlawula njengolubuchule laliyi $ 2,544. Isiqalo esithobekileyo somntu oye waba yindoda yokuqala yegaluli-dollar yokuqala . Kodwa ke, uJack Nicklaus wathola imali engama-33.33 ayi-$.
Iindlela Zokunqoba zeThuthi zaqala ngokukhawuleza
Ngoko i-Woods yagqiba i-60 kwinqanaba layo lobugcisa kwi-Greater Milwaukee Open 1996. Ekugqibeleni kwakhe kokuqala kwe-Top 10 kwafika iiveki ezimbini kamva iQuad City Classic, apho wadibana khona kwindawo yesihlanu. Ekugqibeleni kwakhe okuPhambili kwe-3 kwakule veki elandelayo, kwi-BC Open (eboshwe okwesithathu).
Kwaye ukuphumelela kokuqala kweThuni kwenzeka ngo-1996 i-Las Vegas Invitational, eyenziwa ngo-Oktobha 6, 1996. Kwiinyanga ezintandathu emva koko, ama-Woods alawulwa ngo- 1997 iMasters . Kwaye yonke imbali.
IziFulentshi zeFrench kunye neeFom eziZodwa
'Xa Undifumana' nguRebecca Stead Book Club Iingxoxo Zemibuzo